May | 2015 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
အမျိုးသားရေးဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး ဇောင်းကြွနေတဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒီတွေကို ဒီလိုအကောင်မထွားလာခင်ကတည်းက ချေမှုန်းပစ်ကြ
May 31, 2015 drkokogyi
ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီးမှာ ရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ ပညာတတ်လူငယ်အများစုရဲ့ အတွေးအခေါ်က လက်ဝဲအယူ၊ အနှစ်နှစ်အလလ ခိုးဆိုးဖိနှိပ် တတိုင်းပြည်လုံး ဖွတ်တရွတ်လိုက်သွားအောင် ထင်တိုင်းကြဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နေ၀င်းရဲ့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်အစိုးရကို တော်လှန်ပြောင်းလဲပြီး ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို ဆွဲကိုင်ကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ ယေဘုယျကျတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကို ပြောရရင် နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုက နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန် (Transition Period)မျိုးမှာ အဓိကကြီးစိုးလွှမ်းမိုးထားတဲ့ အတွေးအခေါ်ကပဲ အဆုံးသတ်အောင်ပွဲခံတဲ့အခါမှာ ဖြစ်လာတဲ့စနစ်ရဲ့ အထိုင်ဖြစ်သွားလေ့ရှိတယ်။
မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တောင် ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာယောင်ဆောင်ပြီးတော့ လာကြတာလို့ ခွဲပြီး သုံးနှုန်းလိုက်ရတယ် မဟုတ်လား
လှေစီး ဒုက္ခသည်တွေ ကိစ္စမှာ နိုင်ငံတကာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထက် မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ အဓိက ပိုပြီး ဖိအားပေးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါဟာ ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလဲ။ မြန်မာကို အညှိုးနဲ့ချည်း လုပ်နေတာလို့တော့ ကုလသမဂ္ဂလို၊ နိုင်ငံတကာလိုဟာကို ပြောလို့မရဘူး။
(၁) အစိုးရက ဘယ်နေရာမှမှ မယုံကြည်ရလို့။ ဘယ်လိုမှကို သိက္ခာမရှိလို့။
Mohd Noor UNHCR. အထူးသတင်း ရန်ကုန်မြို့နှင့် သက်ဆိုင်သူများ
UN သမားများအတွက် တတိယနိုင်ငံ မျော်လင့်ချက်နှင့် CIMB Bank Account
UN သတင်းတွေ ကြားနေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ သတင်းကောင်းများ မဟုတ်သည့်အတွက် မတင် ဖြစ်ခဲ့ပါ။
၅လ ပိုင်းထဲမှာ နောက်ထက် မကောင်းသတင်းများနှင့် လှေစီးသူများကြောင့် အပြောင်းအလဲများကို ထက်ကြားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ကောင်းသော အလုပ်၊ ကောင်းသော အတွေး ၊ ကောင်းသော စကားများသာ လက်ဆင့်ကမ်းပေးချင်သောကြောင့် သတင်းဆိုးများကို မတင်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ သိသင့်တယ်လို့ ထင်သည့်အတွက် သို့မဟုတ် အဆိုးထဲက အကောင်းရပါစေ ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြားသိရသော သတင်းတချို့အား တင်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မွတ်စလင်တွေနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို အကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ သီရိလင်္ကာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်း BBS နဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ပြီးတော့ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်တာကို ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်သံဃာ့နာယကက ကန့်ကွက်ကြောင်း စာထုတ်ဘူးပါသလဲ?
May 30, 2015 drkokogyi
Credit – Twal Har
စကားတွေပြောစရာမဲ့ကုန်ပါပြီ။ အလင်္ကာကြယ်ဆရာတော် အရှင် Thawbita နဲ့ ဆရာတော်အရှင်ခေမာနန္ဒတို့ နှစ်ပါးရဲ့ Facebook ပေါ်က Status တွေဖတ်ပြီး စိတ်လည်းတော်တော်မကောင်းဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးဟာ မဘသ ကိုမထောက်ခံသူ၊ ဘာသာခြားအပေါ်မှာ မျှတတဲ့သဘောထားကြီးသူတွေအဖြစ် ကျနော်ယုံကြည်ထားတာပါ။ ဆရာတော်နှစ်ပါးရေးတဲ့ပိုစ်တွေကိုလည်း မှန်မှန်စောင့်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အလင်္ကာကြယ်ဆရာတော် ရေးတာတွေက ဘာသာခြားတွေကို မသိမသာကွက်ရေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။
The exempted children’s DATE OF BIRTH would become inevitable or irrefutable evidence to punish the gov.ဒီလို ဥပဒေပြဌာန်းမှုဟာ…လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှာ ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေပါဆိုတာကို…ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့အခါ….
May 29, 2015 May 29, 2015 drkokogyi
IF they exempt Bama Buddhists and Rakhine Buddhists,,,and apply strictly on MINORITIES only, It may be good for NOW only…later the exempted children’s DATE OF BIRTH would become inevitable or irrefutable evidence to punish the Federal and Rakhine GOVERNMENTS and relevant authorities as the crime against humanity…
Maung Maung Skw shared M-Media‘s photo.
ဒီဥပဒေဟာ…ဗမာတွေရခိုင်တွေကိုတော့ လွတ်လပ်ရေးပေးပြီး…တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာဘဲကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်……..
ဒါပေမဲ့…အချိန်တချိန် ရောက်လာလို့…ဒီလို ဥပဒေပြဌာန်းမှုဟာ…လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှာ ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေပါဆိုတာကို…ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့အခါ….
For the crimes against humanity, includingagenocide, haul the following genocidaires to the Hague.
May 29, 2015 May 30, 2015 drkokogyi
The2Immediate Next Steps to Stop ‪#‎Myanmar‬‘s Genocide of the ‪#‎Rohingya‬
Meet the following 16 genocidaires and get them to The Hague
1) retired Senior General Than Shwe (Officer Training School In-take ?)
အိန္ဒစက္ကာဘိဝံသ….ဆိုတဲ့ …ဘုန်းကြီးဆိုးဟာ…သူ့ရဲ့ (၉၆၉ မီးအိမ်ရှင်) ဆိုတဲ့ account မှာ…အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့…မွတ်စလင်တွေကို…နည်းမျိုးစုံနဲ့ စော်ကားနေပြီးတော့…အမုန်းတရားတွေကို ရေးသားနေပါတယ်
May 29, 2015 drkokogyi
အိန္ဒစက္ကာဘိဝံသ….ဆိုတဲ့ …ဘုန်းကြီးဆိုးဟာ…သူ့ရဲ့ (၉၆၉ မီးအိမ်ရှင်) ဆိုတဲ့ account မှာ…အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့…မွတ်စလင်တွေကို…နည်းမျိုးစုံနဲ့ စော်ကားနေပြီးတော့…အမုန်းတရားတွေကို ရေးသားနေပါတယ်….ပဋိပက္ခများ ဖန်တီးနေပါတယ်…
တနေ့မနေ့ကမှ..လူရာဝင်…မြို့ပေါ်ရောက်လာပြီး…သမိုင်းစဉ်တလျှောက် ငြိမ်းချမ်းစွာရှိနေခဲ့တဲ့ ခံလူးရွာကို…မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်…သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ…လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေတာကို…တွေ့ရပါတယ်…..(တရားခံစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားနိုင်ရန်…တင်ပြလိုက်ပါတယ်…)